အယုံလွယ်တဲ့ မိန်းခလေးတွေ ဖတ်ဖို့ – WunYan
အယုံလွယ်တဲ့ မိန်းခလေးတွေ ဖတ်ဖို့
Posted on December 20, 2018 by whuk-46651
တစ်ခါက ကောင်မလေးတစ်ယောက်သူ့အဘွားအိမ် သွားဖို့ဆိုပြီး တောင်တက်လမ်းအတိုင်းလျှောက်လာနေတုန်း ရှောကနဲ အသံကြားတော့ ငုံ့ကြည့်လိုက်တယ်… ခြေထောက်နားမှာ မြွေတစ်ကောင်…မြွေက ခလောက်ဆွဲမြွေအမျိုးအစားအဲ့ဒီအချိန်မှာ ကောင်မလေးက ဘာမှမလုပ်ရသေးခင်..မြွေက ကောင်မလေးကိုပြောပါတယ်…သူသေရတော့မယ် ထင်တယ်တဲ့.သူအရမ်းလည်း ချမ်းနေတယ်တဲ့.ဒီနေရာမှာ အရမ်းအေးတာပဲတဲ့…အခုထိ ဘာမှလည်း မစားရသေးဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်ရင် သူ့ကို ကောင်မလေးရဲ့ အင်္ကျီထဲထည့်ပြီး
ကောင်မလေးနဲ့ အတူ ခေါ်သွားပါလားတဲ့ လုပ်ရော…ကောင်မလေးက ပြန်ပြောတယ်.!မဖြစ်ဘူး…မဖြစ်ဘူး…..နင်ဘာမြွေလဲဆိုတာ ငါသိတယ်.!နင်က ခလောက်ဆွဲမြွေ…ငါ နင့်ကို ခေါ်သွားရင်နင် ငါ့ကိုကိုက်မှာ…နင်က အဆိပ်ပြင်းတယ်…မြွေက ကောင်မလေးပြောတာကို လက်မခံဘူး မကိုက်ဘူး…မကိုက်ဘူး…စိတ်ချ..နင်သာ ငါ့ကိုကူညီရင်…ငါဟာ နင့်သူငယ်ချင်းကောင်းပဲနင့်ကိုငါ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် တကယ်ဆက်ဆံမှာ…
မြွေက ဒီလိုပြောလာတော့ ကောင်မလေး တွေသွားတယ်.ပြီးတော့ မြွေကိုကြည့်တယ် မြွေက လှလိုက်တာ သူ့အကွက်လေးတွေက ပန်းချီကားတစ်ချပ်လိုပဲငါမြင်ဖူးသမျှ မြွေတွေထဲမှာ သူအလှဆုံးပဲ…ကောင်မလေး ချက်ချင်းပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်.
ကောင်းပြီ နင့်ကို ငါယုံတယ်…နင့်ကို ငါကယ်မယ်.ဘယ်လိုသက်ရှိသတ္တဝါမဆို ကြင်နာမှုနဲ့ ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာ ငါလက်ခံတယ်…ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ကောင်မလေးက မြွေကို ညင်ညင်သာသာနဲ့ ယူပြီး အင်္ကျီအောက်ထဲထည့်လို့ သူ့အဘွားအိမ်ကို ဆက်ထွက်လာခဲ့တယ်…။
လျှောက်လာရင်း…လျှောက်လာရင်းနဲ့ ကောင်မလေး ပြင်းထန်တဲ့ နာကျင်မှုတစ်ခုကို ခံစားလိုက်ရတယ်…။မြွေက သူ့ကို ကိုက်လိုက်ပါပြီ…ကောင်မလေးငိုတယ်…နောင်တရတယ်နင် ငါ့ကို ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ…??နင်ပြောတော့ မကိုက်ဘူးဆို…ငါ နင့်ကို ယုံခဲ့တယ်လေ…
မြွေက တစ်ခွန်းပဲပြန်ပြောပါတယ်…နင် ငါ့ကို ခေါ်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ကတည်းကငါဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲဆိုတာ နင်သိပြီးသားပဲ…မတတ်နိုင်ဘူးလေ…နင့်ထိုက်နဲ့ နင့်ကံပေါ့ ဒီလိုပြောပြီး အမြီးလေးကို ခလောက်လို့ တွန့်တွန့်တွန့်တွန့်နဲ့ ထွက်သွားပါတော့တယ်…။ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲ….
ပုံပြင်ထဲက မြွေလို ကျက်သရေတုံးတဲ့လူဆိုတာတွေကို ကျနော်တို့ အတော်များများ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြုံဖူးမယ်ထင်ပါတယ်…
– တချို့လူတွေက စေတနာနဲ့ မတန်ပါဘူး.– တချို့လူတွေက သွားသနားလို့ မရပါဘူး.– တချို့လူတွေက လျှာနှစ်ခွနဲ့ ခုနက မြွေလိုပါပဲ.– တချို့လူတွေက ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ်တွေပါ.– တချို့လူတွေက ခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုးပါပဲ.– တချို့လူတွေက အယုံသွင်းပြီးမှ ယုတ်မာတတ်ပါတယ်– တချို့လူတွေက မူယာမာယာသိပ်များပါတယ်– တချို့လူတွေက ကူလီကူမာသိပ်ကျွမ်းပါတယ်.– ဒီတော့ လူတိုင်းကို သွားပြီးတော့ သနားဖို့ မလိုဘူး– နင့်ကိုမှ မရရင် ငါသေရပါတော့မယ်တို့ ၊
ငါဒီတစ်ခါ တကယ်လိမ္မာပါပြီတို့ ၊ ငါနောက် မလုပ်တော့ပါဘူး ကတိပေးပါတယ်တို့ဆို ချင့်ယုံကြပေါ့.နောက်ပြီး သနားကမားရုပ်နဲ့ မျက်ရည်ခံထိုးတိုင်း သနားစရာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုလည်း ခေါင်းထဲထည့်ထားပါ..။အပေါ်ယံရွှေမှုံကြဲထားတဲ့ မျက်နှာစာတွေနဲ့လည်း သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်တွေကို ခဏတာအားဖြင့် ပြည်ဖုံးကာ ချထားလို့ရတယ် ဆိုတာကိုလည်း စွဲမှတ်ထားပါ..။တချို့(တချို့) သော သူတွေဟာဘယ်လိုသနားကြင်နာမှုမျိုး…စေတနာထားမှုမျိုး…ယုံကြည်မှုမျိုး…ကိုယ်ချင်းစာမှု့မျိုးနဲ့မှ မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာကို နားလည်ထားလိုက်ပါ.။တချို့(တချို့) လို့ သေချာရေးထားတယ်နော..အကုန်လုံးကို မဆိုလိုဘူး.
ပုံပြင်လေးကို oh inspiring stuff မှာ ဖတ်ဖူးတာပါ..
Credit : WaiPhyoMaung
အယုံလှယျတဲ့ မိနျးခလေးတှေ ဖတျဖို့
တဈခါက ကောငျမလေးတဈယောကျသူ့အဘှားအိမျ သှားဖို့ဆိုပွီး တောငျတကျလမျးအတိုငျးလြှောကျလာနတေုနျး ရှောကနဲ အသံကွားတော့ ငုံ့ကွညျ့လိုကျတယျ… ခွထေောကျနားမှာ မွှတေဈကောငျ…မွှကေ ခလောကျဆှဲမွှအေမြိုးအစားအဲ့ဒီအခြိနျမှာ ကောငျမလေးက ဘာမှမလုပျရသေးခငျ..မွှကေ ကောငျမလေးကိုပွောပါတယျ…သူသရေတော့မယျ ထငျတယျတဲ့.သူအရမျးလညျး ခမျြးနတေယျတဲ့.ဒီနရောမှာ အရမျးအေးတာပဲတဲ့…အခုထိ ဘာမှလညျး မစားရသေးဘူးတဲ့ဖွဈနိုငျရငျ သူ့ကို ကောငျမလေးရဲ့ အင်ျကြီထဲထညျ့ပွီး
ကောငျမလေးနဲ့ အတူ ချေါသှားပါလားတဲ့ လုပျရော…ကောငျမလေးက ပွနျပွောတယျ.!မဖွဈဘူး…မဖွဈဘူး…..နငျဘာမွှလေဲဆိုတာ ငါသိတယျ.!နငျက ခလောကျဆှဲမွှေ…ငါ နငျ့ကို ချေါသှားရငျနငျ ငါ့ကိုကိုကျမှာ…နငျက အဆိပျပွငျးတယျ…မွှကေ ကောငျမလေးပွောတာကို လကျမခံဘူး မကိုကျဘူး…မကိုကျဘူး…စိတျခြ..နငျသာ ငါ့ကိုကူညီရငျ…ငါဟာ နငျ့သူငယျခငျြးကောငျးပဲနငျ့ကိုငါ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ တကယျဆကျဆံမှာ…
မွှကေ ဒီလိုပွောလာတော့ ကောငျမလေး တှသှေားတယျ.ပွီးတော့ မွှကေိုကွညျ့တယျ မွှကေ လှလိုကျတာ သူ့အကှကျလေးတှကေ ပနျးခြီကားတဈခပျြလိုပဲငါမွငျဖူးသမြှ မွှတှေထေဲမှာ သူအလှဆုံးပဲ…ကောငျမလေး ခကျြခငျြးပဲ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ.
ကောငျးပွီ နငျ့ကို ငါယုံတယျ…နငျ့ကို ငါကယျမယျ.ဘယျလိုသကျရှိသတ်တဝါမဆို ကွငျနာမှုနဲ့ ထိုကျတနျတယျဆိုတာ ငါလကျခံတယျ…ပွောပွောဆိုဆိုနဲ့ ကောငျမလေးက မွှကေို ညငျညငျသာသာနဲ့ ယူပွီး အင်ျကြီအောကျထဲထညျ့လို့ သူ့အဘှားအိမျကို ဆကျထှကျလာခဲ့တယျ…။
လြှောကျလာရငျး…လြှောကျလာရငျးနဲ့ ကောငျမလေး ပွငျးထနျတဲ့ နာကငျြမှုတဈခုကို ခံစားလိုကျရတယျ…။မွှကေ သူ့ကို ကိုကျလိုကျပါပွီ…ကောငျမလေးငိုတယျ…နောငျတရတယျနငျ ငါ့ကို ဘယျလိုလုပျလိုကျတာလဲ…??နငျပွောတော့ မကိုကျဘူးဆို…ငါ နငျ့ကို ယုံခဲ့တယျလေ…
မွှကေ တဈခှနျးပဲပွနျပွောပါတယျ…နငျ ငါ့ကို ချေါသှားဖို့ ဆုံးဖွတျကတညျးကငါဘယျလိုအမြိုးအစားလဲဆိုတာ နငျသိပွီးသားပဲ…မတတျနိုငျဘူးလေ…နငျ့ထိုကျနဲ့ နငျ့ကံပေါ့ ဒီလိုပွောပွီး အမွီးလေးကို ခလောကျလို့ တှနျ့တှနျ့တှနျ့တှနျ့နဲ့ ထှကျသှားပါတော့တယျ…။ပုံပွငျလေးကတော့ ဒါပါပဲ….
ပုံပွငျထဲက မွှလေို ကကျြသရတေုံးတဲ့လူဆိုတာတှကေို ကနြျောတို့ အတျောမြားမြား ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ ကွုံဖူးမယျထငျပါတယျ…
– တခြို့လူတှကေ စတေနာနဲ့ မတနျပါဘူး.– တခြို့လူတှကေ သှားသနားလို့ မရပါဘူး.– တခြို့လူတှကေ လြှာနှဈခှနဲ့ ခုနက မွှလေိုပါပဲ.– တခြို့လူတှကေ ခှေးမွီးကောကျ ကညျြတောကျစှပျတှပေါ.– တခြို့လူတှကေ ခုတဈမြိုး တျောကွာတဈမြိုးပါပဲ.– တခြို့လူတှကေ အယုံသှငျးပွီးမှ ယုတျမာတတျပါတယျ– တခြို့လူတှကေ မူယာမာယာသိပျမြားပါတယျ– တခြို့လူတှကေ ကူလီကူမာသိပျကြှမျးပါတယျ.– ဒီတော့ လူတိုငျးကို သှားပွီးတော့ သနားဖို့ မလိုဘူး– နငျ့ကိုမှ မရရငျ ငါသရေပါတော့မယျတို့ ၊
ငါဒီတဈခါ တကယျလိမ်မာပါပွီတို့ ၊ ငါနောကျ မလုပျတော့ပါဘူး ကတိပေးပါတယျတို့ဆို ခငျြ့ယုံကွပေါ့.နောကျပွီး သနားကမားရုပျနဲ့ မကျြရညျခံထိုးတိုငျး သနားစရာမကောငျးဘူးဆိုတာကိုလညျး ခေါငျးထဲထညျ့ထားပါ..။အပျေါယံရှမှေုံကွဲထားတဲ့ မကျြနှာစာတှနေဲ့လညျး သူတို့ရဲ့အတှငျးစိတျတှကေို ခဏတာအားဖွငျ့ ပွညျဖုံးကာ ခထြားလို့ရတယျ ဆိုတာကိုလညျး စှဲမှတျထားပါ..။တခြို့(တခြို့) သော သူတှဟောဘယျလိုသနားကွငျနာမှုမြိုး…စတေနာထားမှုမြိုး…ယုံကွညျမှုမြိုး…ကိုယျခငျြးစာမှု့မြိုးနဲ့မှ မထိုကျတနျဘူးဆိုတာကို နားလညျထားလိုကျပါ.။တခြို့(တခြို့) လို့ သခြောရေးထားတယျနော..အကုနျလုံးကို မဆိုလိုဘူး.
ပုံပွငျလေးကို oh inspiring stuff မှာ ဖတျဖူးတာပါ..